Soomaaliya oo la soo baxaysa shiidaal 2020 | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Soomaaliya oo la soo baxaysa shiidaal 2020
Soomaaliya oo la soo baxaysa shiidaal 2020
Sida khubarrada dhanka macdanta iyo shiidaalka ay saadaalinayaan Soomaaliya ayaa noqon doonta aag cusub oo ay ku loollamaan shirkadaha waaweyn ee soo saara saliidda iyo gaaska, taas oo ka dhigan fursad uu dalka uga faa’iidaysan karo inuu helo dakhli xooggan oo uu uga bixi karo gacan-hoorsiga iyo gaajada kusoo noqnoqota.
Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer u dirtay digniino shirkadaha haysta qandaraasyada wixii ka horreeyay 1991-kii, kuwaas oo dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay xilligaas kula heshiisay goobo kala duwan si ay sahmin iyo qodis shiidaal uga billaabaan. Shirkadahan ayaa dalka isaga baxay dabayaaqadii 1990-kii markii ay ku shaqayn waayeen amni-xumadii dalka ka jirtay.
Balse xaaladda amniga oo soo hagaagaysa iyo wasaaradda Macdanta iyo Batroolka oo howlgalisay khubarro aqoon u leh sharciyada wadaxajoodka caalamiga ah ee saliidda iyo gaaska ayaa labo-kacleyn ku keenay in shirkadahan ajnabiga ah ay dib u soo nooleeyaan daneyntooda ku wajahan sida kheyraadka Soomaaliya loo soo saari lahaa, looguna suuq geyn lahaa seyladaha saliidda caalamka.
Shirkadaha Royal Dutch Shell, Chevron, Conocco Philips iyo kuwa kale oo iyagana laga leeyahay Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa la filayaa inay dalka dib ugu soo laabtaan horraanta sanadkan sida uu Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya Dr. Faarax Cabdi Xasan noo xaqiijiyay. Wuxuuna xusay in ay hadda xoogga saarayaan sidii loo qabyo-tiri lahaa xeerarka macdanta iyo shiidaalka oo la horgeyn doono Golaha Wasiirada marka ay dib u shaqo billaabaan.
Dhibaatooyinka ugu badan ee iminka taagan ayaa ah in shirkado ajnabi ah ay heshiisyo sharci-darro ah la galaan maamul-goboleedyada iyagoo aan soo marin dowladda dhexe oo ah cidda kealiya ee heshiisyada noocan oo kale ah gali karta. Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ayaa Xaqiiqa Times u sheegtay in ay Somaliland qandaraas macdan qodis ah si sharci-darro ah ugu saxiixday shirkadda ARC oo nin Shiineys ah uu ku aasaasay Hargeysa, balse aan u diiwaangashaneyn, kuna howlgalin si sharci ah, inkastoo khilaaf soo kala dhex galay iyada iyo dadka deegaanka uu toddobaadkii hore sababay inay isaga baxdo halkaas.
Puntalnd waxay qandaraas siisay horraantii Janaayo ee sanadkan shirkadda ION Geophysical oo saldhiggeeda uu yahay Mareykanka. Wasaaradda ayaa xaqiijisay in ay arrinkaa ka soo saari doonto war-saxaafadeed sharciga ku qotoma, kalana hadli doonta dalka shirkadda ION Geophysical laga leeyahay.
“Dhibaatada ugu weyn ee mar walba soo noqnoqota ayaa ah in ay maamul-goboleedyo keligood saxiixaan qandaraasyo aanay dowladda dhexe la ogayn, oo ay dalka u soo galiyaan si iskood ah shirkado doonaya inay boobaan kheyraadka ummadan oo dhan ka dhaxeeya. Taasi waxay u baahan tahay inaan mar walba ka hortagno. Waxaan ku guulaysannay inaan dalka ka saarno shirkado badan oo si tuugeysi ah kusoo galay” ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Wasaaradda.
Wasiirka Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya, mudane Daa’uud Maxamed Cumar ayaa sheegay in ay wasaaraddiisa diyaarisay istaraatiijiyad lagula soo baxayo shiidaalka iyo macdanta sanadka 2020 haddii khilaafka siyaasadda ee soo noqoqda aanu saamayn istiraatiijiyadaas, wuxuuna tilmaamay inay maamul-goboleedyada kala xaajoon doonaan sidii loo qaybsan lahaa dakhliga kasoo xarooda kheyraadka dhulka hoostiisa ku jira.
Mudane Daa’uud ayaa yiri “tallaabada koowaad ee aan doonayno waa dhamaystirka shuruucda shiidaalka iyo macdanta, qaybsiga dakhliga maamul-goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo guud ahaan iswaafajinta shuruucda dalka u yaalla ee la xiriira kheyraadkeenna. Taas markaanu dhamaystirno ayaan u gudbi doonnaa sidii aan uga faa’iidaysan lahayn kheyraadka dhulkeenna ka buuxa bad iyo barriba. “
Wasiirka ayaa intaa ku daray in kheyraadka uu dalkeena Alle ku manaystay uu yahay mid Soomaali oo dhan ku filan, isagoo rajo weyn ka muujiyay in ka faa’iidaysigiisa uu yahay muhiimadda koowaad. Waxa uu carrabka ku adkeeyay in kheyraadka dalka uu ka dhaxeeyo shacabka oo dhan, sidaa awgeedna loo baahan yahay in ummadda looga wada faa’iideeyo. Daa’uud ayaa caddeeyay in laga gudbay xilligii ay shakhsi iyo koox kooban ku hamin jirtay ka faa’iidaysiga iyo afduubashada dhaxal ummad dhan ka dhaxeeya, loona gudbay xilli isla xisaabtan.
Soomaaliya oo ah dal aan weli ka faa’iidaysan shiidaalka iyo gaaska badda iyo barrigaba ku jira ayay fursad dahabi ah u tahay inay la soo baxdo kheyraadkeeda. Waxayse ku xiran tahay in laga dhabeeyo himiladan sida ay dowladda federaalka ah u dhisto maamul goboleedyada harsan, oo loo xaqiijiyo amniga guud ee dalka, sida loo helo xeerar si cad u qeexaya shuruucda shiidaalka iyo macdanta iyo in la soo afjaro xasillooni-darrada siyaasadda ee dalka ee soo noqnoqota.
Previous articleSoomaaliya oo Ka Qayb Gashay Carwo Buugaag oo Lagu Qabtay Masar
Next articleMadaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxwaynaasha Saddex Dawlad Goboleed oo Madal Cusub Sameystay